Ny Anganom-pitiavana Sy Ny Vetaveta Avy Ao Angola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2013 12:21 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, አማርኛ, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Tanora Angole mpitoraka bilaogy sady “mpampita vaovao” monina any Loandà i Rosie Alves. Fomba fanoratra Portiogey mifanaraka indrindra amin’ny bilaogy ny crónica – tany am-boalohany dia navoaka an-gazety, Angano kely izy ireo, indraindray marina, indraindray noforonina, izay mivoy fomba fijery na hevitra iray amin'ny endrika tena voafintina.
Tao amin’ny bilaoginy “Sweet Cliché” [amin’ny teny Portiogey], Rosie Alves dia nanoratra tantara kely maro, matetika mikasika fitiavana sy finamanana (nampitandrina ny mpamaky ny Blogspot fa natokana ho an’ny lehibe ny ao anaty bilaogy). Indro misy santionany amin’ny asasorany vao haingana izay tena malaza : “Matei o meu amor” – novonoiko ny fitiavako” :
Tamin’iny alina nangatsiaka sady avy orana iny no nitranga izy io, teo ampidirana ny trano. Niaraka taminà tsindrona iray monja teo amin'ny fo, liandrà sady tsy misy antra, novonoiko ny fitiavako noho ny fahafinaretako sy hirifiriko. Reko ny nahafatesany. Nandeha rà izy, nanary ny lokony nandritra ny fikorianan-drà arakaraky ny nikorianàn'ny rà ilay bola menamena…
Nangatsiaka be, malina ; hitako nitolefika moramora ilay fitiavako, niforona ny ranomasin-drà. Ohatra ny nihodina ny zava-drehetra. Nieritreritra ireo fotoana maro feno fifaliana niarahanay aho, ireo fahafinaretana lehibe nentin'ilay fitiavako ho ahy, nefa vetivety teo, nitamberina tao an-tsaiko ny andro izay namadihan'ilay fitiavako ahy, nameno ny lohako. Vehivavy iray nihazakazaka nandalo, nanarona ny lohany tamin’ny harona plastika mba hiarovany amin’ny orana no toa tsy rototra akory amin'izay hitan'ny masony.
Mbola vao 21 taona monja, dia efa mitàna toerana manokana amin’izay antsoiny hoe – tontolon’ny bilaogy Angole vao misandratra i Alves – na dia any ivelany aza izy no malaza be kokoa noho ny ao amin’ny fireneny. Tsy ela akory izay dia nitafatafa taminy izahay – na dia teo aza ny faharatsian’ny fifandraisana antserasera 3G – mba hahafantarana bebe kokoa mikasika azy.
Efa ho 3 taona izay Rosie no nibilaogy ary efa nahazo mpamandrika maro, na dia teo aza ny ‘biographie’ ao amin’ny Twitter (@rosie_alves), izay milaza fa ‘’ Aza manaraka ahy, very aho ‘’.
GV: Ahoana no hamaritanao ny karazan-javatra soratanao?
Tia manoratra crónicas miendrika tantara aho – izay matetika no fifamalian’olon-droa fotsiny. Manakaiky kokoa ny angano fohy izy ireny. Somary mirona betsaka kokoa amin’ny zava-mitranga andavanandro izy ireo, izany hoe zava-mitranga tsy misy mampiavaka azy loatra, iainan'ny rehetra. Tsy adinoko ihany koa ny crónica mampihomehy na filozofika, izay mampieritreritra. Tia manafangaro zavatra aho ary mitrandraka tontolo vaovao.
GV: Oviana ianao no nanomboka nibilaogy? Nahoana ianao no manoratra ?
Nanapa-kevitra ny hanomboka hibilaogy aho tamin’ny 2010. Mampitony ahy ny manoratra. Isaky ny manoratra aho, tsapako ho misy vesatra miala eo ambony soroko. Ary koa ao an-delako (mihomehy mafy). Amiko, izay no fitsaboana tsara indrindra. .
GV:Manoratra matetika mikasika ny fitiavana, ny finamanana sy ny firaisana ara-nofo ianao. Ahoana no fitsàran’ny fiaraha-monina Angole ny mikasika ireo hevitra ireo ? Fady ve ireo ? Misy lahatsoratra miresaka vetaveta ve any Angola ?
Somary mbola mpitahiry ny fomban-drazana ny fiaraha-monina Angole amin'ny resaka mahakasika ireo. (Io no manazava hoe maninona, ao aorian’ny Espana, i Angola no tany kely mpitsidika ny bilaogiko). Betsaka fady any Angola. Taloha, afaka nataontsika hoe resaka fitahirizana fomba io. Amin’izao fotoana izao miaraka amin’ireo fiovàna mitranga eny anatin'ny fiaraha-moninay, tsy hitako ny anton'ireo fady. Raha ny fantatro aloha, tsy misy literatiora miresaka vetaveta any Angola ( farafaharatsiny amin'ireo atonta sy aely). Ny akaiky indrindra manakaiky an'io sy novakiako dia ny ‘Ritos de Passagem’ ( Ritam-pandalovana ) asan’ilay poety vavy Paula Tavares. Mahazatra ahy ny maheno olona milaza fa ny fiaraha-monina Angole dia tsy voaomana ho amin’io karazan-dresaka io. Marina izany, tsy voavolavola izy. Ary raha mbola ny zava-mitranga amin’izao aloha, dia tsy ho vonona mandrakizay izy…
GV:Azonao lazaina anay ve toy ny ahoana izany hoe tovovavy any Loanda?
Tsy moramora izany, betsaka ny fanavakavahana sy tsy fanajana ny vehivavy aty.
GV: Tantarao anay ny fahatsiarovanao ny fahazazanao !
Mbola vao efa-taona aho, tena naniry mafy ny hamaky bokin-tantara nomen-draiko ahy, ka dia nentiny taminà mpampianatra iray aho izay nanampy ahy indrindra hahay hamaky teny sy hanoratra mialoha ny hidirako tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Nandeha tany foana aho isan’andro miaraka amin'ny kitapoko teo an-damosina. Na dia hatrizao aza, ireo no vanim-potoana tsara indrindra izay niainako.
GV:Ahoana no hamaritanao ny andian-taranaka misy anao any Angola?
Niaina fiovàna goavana ny andian-taranaka misy ahy. Andian-taranaka mahavita zavatra, feno mpanonofy ary olona manana karazam-pahafahana manao zavatra maro. Saingy tena vitsy amin’izy ireo no mahafantatra [ny fahafahan'izy ireo manao zavatra]. Amin’ny lafiny iray, ao anaty fifaninanana izahay ka tsy mba afaka mijery izay manodidina anay sady tsy miara-miady ho amin-javatra mitovy. Vitsy no mahalala ny dikan’ny teny hoe ”firaisankina” sy “fivondronana”. Manana tombony be amin'ny fahafahana manangom-pahalalana izahay, ary na izany aza dia toy ny mbola miaina tamin'ny andron'ny vato sy ny taolana ihany.
Any Angola, misy fehezanteny manao hoe “izay tanora tsy afaka mifety dia tsy tanora”. Ny tanora ankehitriny dia tsy misaina afa-tsy ny hilalao. [Tsy atao bango tokana, satria mba misy ihany ny maningana].
GV: Mieritreritra manana ny toeranao ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy midadasika any Angola ve ianao ?
Mino izany aho. Manana ireo mitovy amiko aho ety anaty aterineto, mitombo habe isan’andro ny tontolon’ny bilaogy Angole. Ny vondrona Facebook “Blogueiros Angolanos” («bilaogera Angole«) dia noforonina, ary nampiasainay mba hifamporisihan'ny tsirairay, sy hamoahana ny asanay. Ao izahay no mampiady hevitra, ao no mifanakalo hevitra sy traikefa. Ary tsy ao ihany, manana ireo mitovy amiko hafa firenena koa aho maneran'izao tontolo izao.
Sary avy amin'ny Instagram an'i sweetclichee:
“-Zazalahy, labiera iray azafady.
- Tsy manana izahay.
- Manana hadisoam-panantenana ve ‘nareo? Mila fatra in-droan'ny famàrana aho
-Eny, misy. Mipetraka itsy izy, miaraka amin’ny sigara eny an-tanany
- Iry lehilahy iry ? Ahoana no hiantsoako azy ?
-Antsoy hoe fitiavana izy.”
GV: Lazao anay ny fomba fanoratrao. Inona avy ireo fanamby goavana ho anao?
Amin'ny ankapobeny, raisiko ny findaiko dia manomboka manoratra aho ary ao anatin'ny ora roa latsaka monja, dia vitako. Indraindray aho mandany roa herinandro manoratra lahatsoratra iray, ary tena mampiasa loha ahy izay. Ny iray amin'ireo fanamby goavana ho ahy, raha tsy ny hany tokana aza, dia ny hahafahana mametraka ireo mpamakiko ho ao anatin'ny zavatra soratako mihitsy, ary azoko lazaina fa tratrako izany raha ny tamberina voaraiko no ifotorana.
GV:Iza avy ireo mpamaky ny asasoratrao, fantatrao ve ? Ahoana no fihetsiky ny olona amin’ny asasoratrao ?
Afaka miteny aho fa marobe ireo olona mamaky azy io. Ny tiako ambara amin'izany dia : sokajin-taona rehetra, avy amin’ny firenena maro samihafa. Tena mahatalanjona, saingy araka ny antontanisa, any Etazonia no be indrindra mpamaky ny bilaogiko. Misy ireo mamaky amin’ny Google Traducteur. Maro no mandrisika ahy, manome hevitra ahy sy mandrisika ahy hanohy. Marina koa anefa fa misy ireo izay tsy tia na diso fandray azy io, efa nantsoin’olona iray aho izay niteny tamiko mba hitandrina amin’ny zavatra soratako.
GV: Inona avy ireo hetahetamponao amin’ny ho avy ?
Olona be nofinofy aho ary raha atomboko ho tanisaina eto ireo hetahetampoko, dia tsy ho efako androany. Saingy iray amin’izy ireny, ary tena miavaka mihitsy, dia ny mba hahatonga ahy ho cronista (chroniqueuse) an-gazety na anaty gazetiboky. Mety ho tsara izany an.